कोरोनाको मारमा, दुई किलोको कुखुरा एक सयमा बिक्री गर्न बाध्य कुखुरापालन व्यावसायी – Namaste Dainik
कोरोनाको मारमा, दुई किलोको कुखुरा एक सयमा बिक्री गर्न बाध्य कुखुरापालन व्यावसायी
September 6, 2020 September 6, 2020 NamastedainikLeaveaComment on कोरोनाको मारमा, दुई किलोको कुखुरा एक सयमा बिक्री गर्न बाध्य कुखुरापालन व्यावसायी
भरतपुर, २१ भदौ-वर्षाको समय भएका कारण तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ तर यहाँ मासुका लागि उत्पादित ब्वायलर कुखुरा भने तरकारीभन्दा पनि सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न किसान बाध्य भएका छन् । तरकारीको मूल्य प्रतिकेजी रु एक सयभन्दा बढी छ । दुई किलोभन्दा बढी तौलको ब्वायलर कुखुरा किसानले रु एक सयमा पनि बिक्री गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
चितवनमा मात्रै सङ्घमा आबद्ध दुई हजार ब्वायलर कुखुरा पालक किसान छन् । “सामान्य किसानले थोरै लगानीमा ब्वायलर कुखरा पाल्छन्, उनीहरुलाई बजारको अवस्थाका बारेमा थाहा हुँदैन”,उहाँले भन्नुभयो,“मारमा पर्ने पनि उनीहरु नै हुन् ।” कुखुरा व्यवसायमा बिचौलियाको राज हुनु किसानमाथि उठ्न नसक्नुको प्रमुख कारण भएको उहाँको भनाइ छ । किसानको खोरमा सस्तोमा कुखुरा उठाएर व्यवसायीले स्टोर गरेर राखेको पौडेलले बताउनुभयो । कुखुराको भाउ र बजार नपाउनुमा ५० प्रतिशत कारण लकडाउन र अन्य बिचौलिया लगायतको कारण भएको उहाँले बताउनुभयो ।
काठमाडौँमा अहिले पनि प्रतिकेजी रु १८० सम्म जिउँदो कुखुरा बिक्री भइरहेको भन्दै उहाँले चितवनलागायत तराईका जिल्लामा प्रतिकिलो रु एक सय सम्ममा बिक्री हुन पनि गाह्रो भएको बताउनुभयो । “काठमाडौँ र तराईमा रु ३० सम्म मात्रै फरक हुनुपथ्र्याे”, उहाँले भन्नुभयो, “यति धरै फरक कसरी भयो ? बुझ्न सकिएको छैन ।” पछिल्लो लकडाउन अघि चितवनलगायत तराईका जिल्लामा जिउँदो कुखुरा प्रतिकेजी रु २६० र काठमाडौँमा रु तीन सय सम्ममा बिक्री भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो,“उत्पादक र उपभोक्ताबीच अझै पनि मूल्यमा धरै फरक छ । किसानबाट उठाएका कुखुरा एक सयसम्म नाफा राखेर बेच्न सकिन्छ तर व्यापारीले आफू अनुकूल गर्छन् । पोल्ट्री क्षेत्रमा सरकारी निकायको अनुगमन छैन, व्यावसायीले आफ्नो मनलाग्दी गर्छन् ।” देशभर २० हजारभन्दा बढी ब्वायलर पालक किसान मात्रै रहेको सङ्घको तथ्याङ्क छ ।
मासुजन्य वस्तु बिक्री वितरण शहर र बजार खुकुलो भएमा केही मात्रामा किसानले मूल्य पाउने उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, “सधैँ किसानले मात्रै घाटा खानुपर्ने यो अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ ?” “नेपाली बजारमा खपतको तुलनामा उत्पादन कम छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर किन किसान पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने विषयको खोजी सम्बद्ध निकायले गरोस् ।” कुखुरा बजार व्यवस्थापन सङ्घले डेढ वर्षदेखि कुखुराको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्न छाडेको छ ।
अध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो,“निष्ोधाज्ञाले सबै ठप्प छ,किसानको खोरबाट कुखुरा उठेको छैन, मासु बिक्री गर्ने पसल खुल्न पाएका छैनन ।” किसानले चल्ला नहालेपछि नष्ट गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ । “चल्ला लगेर ४५ दिनसम्म दाना खुवाएर पाल्दा रु एक सय पनि पाउन मुस्किल भएपछि कसले कुखुरा पाल्छ ?” उहाँले भन्नुभयो,“त्यही भएर अहिले चल्लाको बिक्री कम भएको हो । अहिले हामीले रु ३० मा चल्ला बिक्री गरिरहेका छौँ ।” चल्लाको लागत नै ५६ पैसा पर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल कुखुरा बजार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष हरि लोहनीले बजारमा मासु बिक्री नभएका कारण समस्या भएको बताउनुभयो । “उत्पादन ह्वात्तै बढ्यो तर बजार ठप्प छ”,उहाँले भन्नुभयो, “अनि कसरी भाउ पाउँछ ।” होटल रेष्टुरेन्ट बन्द हुँदा खाने मान्छे घेटेका कारण बिक्री कम भएको उहाँले बताउनुभयो । किसानको खोर मूल्य न्यूनतम प्रतिकेजी रु ८० देखि एक सय सम्ममा कुखुरा उठाइरहेको लोहनीले बताउनुभयो । पछिल्लो निषेधाज्ञा अघि जिउँदो कुखुरा प्रतिकेजी रु.२७० सम्म पुगेको थियो । किसानको कुखुरा खोरबाट उठिरहेको तर भाउ भने नपाएको उहाँले बताउनुभयो । काठमाडौँमा मासु स्टक गर्न थालिएका कारण पनि कुखुरा बिक्री हुन समस्या नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
सोह्र श्राद्ध शुरु भयो,फेरि मलमासको कुरा छ, दशैँमा पनि अवस्था यस्तै होला जस्तो छ । कुखुराको बजार के हुन्छ भन्ने नै अन्योल छ । कार्तिक नलागेसम्म
ब्वायलर कुखुुराको मूल्यमा समस्या नै भइरहने उहाँको बुझाइ छ । चितवनका किसानले उत्पादन गरेको कुखुरा काठमाडौँ,वीरगञ्ज,बुटवल,पोखरालगायत बजारमा बिक्री हुन्छ ।
आत्मनिर्भर बन्दै गएको पोल्ट्री व्यवसायमा हुने उतारचढावले साना लगानीकर्ताहरु पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । विगतमा बर्डफ्लु,भूकम्प लगायतका कारण पनि समय समयमा किसानले समस्या व्यहोर्नु परेको थियो । तर अहिलेको अवस्था त्योभन्दा पनि भयावह बनेको छ । कोरोनाको कहरले मुलुकको अरू क्षेत्र र व्यवसायलाई पनि मारमा पारेकै छ । तर यहाँका कुखुरापालक किसानहरु भने देशको अरु क्षेत्रभन्दा यो व्यवसायलाई बढी मार परेको बताइरहेका छन् । (रासस)
आयुर्वेद र योग ध्यानजस्ता प्राचीन चिकित्सा पद्धति कोरोनाबाट बच्ने सबैभन्दा भरपर्दो उपाय
लकडाउनमा यात्रु पुर्याउन हिडेका बस बिच बाटोमै रोकिए ।
April 27, 2020 Namastedainik
अब खाडीबाट खर्चविहीन नेपाली नि:शुल्क आउन पाउँछन्, होटल पनि फ्रि : मन्त्री भट्टराई (भिडियो )
भूमि फिर्ता लिएमा आजिवन सारा नेपालीले ओलीको जयजयकार गर्ने । गर्ने कि नगर्ने ?
May 23, 2020 Namastedainik